स्थानीय तह निर्वाचन मतपरिणम: कहाँ कहाँ को विजयी भए ? (अपडेट) - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०८:५५ |
काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गणना अहिले जारी छ । शुरुमा वडा नम्बर १ र ३२ को मत गणना शुरु गरेको छ । मतपेटिकामा राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल लेखिएको पर्चा भेटिएको छ । उता पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा पनि मतगणना शुरु भएको छ ।
सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिकामा मेयरमा वडा नं १ मा मानबहादुर पुन सहित एमाले प्यानल बिजयी हुनुभएको छ ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा भने माओबादी केन्द्रका नवराज कार्की विजयी हुनुभएको छ । जाजरकोट बोराकोट १ मा पनि शशीराम गौतम सहित माओबादी केन्द्रको प्यानल विजयी भएको छ ।
काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा वडा नं १ मा एमालेका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ प्यानल सहित बिजयी हुनुभएको छ । धादिङको नेत्रवति गाउँपालिका वडा नं १ मा माओबादीका चन्द्रबहादुर मगर विजयी हुनुभएको छ ।
धादिकै थाक्रे गाउँपालिका वडा नं १ मा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर थापा विजयी हुनुभएको छ ।
कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा एमालेका उम्मेदवार सुरज गुरूङको प्यानल ६१२ मत सहितसहित विजयी भएको छ । निकटतम् प्रतिद्धन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले ४ सय ५९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर, चन्द्रगिरी, शंखरापुर, दक्षिणकाली लगायतका नगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ ।
माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ बाट मतगणना गरिएको छ । यसैगरी राप्ती नगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ । वडा नम्बर ४ र ५ बाट मतणना थालिएको हो । इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि मतगणना सुरुभएको छ ।
कालिका नगरपालिकामा भने चट्याङका कारण वडा नम्बर ११ का उम्मेदवारको मृत्यु भई नयां उम्मेदवार आएकाले २ गतेको मतदानपछि मात्रै मतगणना हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवन जिल्लामा ७७ दशमलव ०३ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
Previousअहिलेसम्म कुन कुन ठाउँमा कसले जिते ?
Nextपर्वतमा मतगणना जारी
देशको राजधानीमै वर्षाको वितण्ड,घरभित्रै कम्मरसम्म पानी ( फोटो फिचर )
२८ असार २०७५, बिहीबार ०४:३८